ज्योति लाइफको आइपीओ आउँदै, को-को भए सञ्चालक समितिमा निर्वाचित ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » ज्योति लाइफको आइपीओ आउँदै, को-को भए सञ्चालक समितिमा निर्वाचित ?
काठमाडौं - ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले ६६ लाख कित्ता अइपीओ जारी गर्ने भएको छ । माघ १० गते बसेको कम्पनीको साधारण सभाले आइपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले जारी पुँजी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३०% आइपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । जारी पुँजीको ७०% ले हुने १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भने संस्थापक सेयरधनीबाट चुक्ता भइसकेको छ ।
कम्पनीले बाँकी पुँजी सर्वसाधारणमा आइपीओ बिक्री गरेर पुर्याउन लागेको हो । माघ १० गते बसेको सभाले संस्थापक समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जनाको निर्वाचन पनि गरेको छ । संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट पशुपति मुरारका, आकाश गोल्छा, नन्द किशोर शर्मा र शर्मिला श्रेष्ठ महर्जन निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
प्रकाशित : Wednesday, February 14, 2018